ထေရ၀ါဒအတွင်းမှ အစွန်းရောက်ထေရ၀ါဒီများသို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ထေရ၀ါဒအတွင်းမှ အစွန်းရောက်ထေရ၀ါဒီများသို့
Posted by realman on Aug 9, 2011 in Copy/Paste | 44 comments
ဘယ်အရာကမှ ဘုရားဟောအစစ်အမှန်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရားမှ မရှိတော့တာကိုး – – – ။
သာသနာပိုင် ဆရာတော်နှင့် ဆရာတော် ဦးဗုဓ်တို့တွင်လားဆိုတော့ – – -မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင် မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်း သူတို့စာပေပိဋကတ်တွေကမှ ဗုဒ္ဓဘုရားဟောအစစ်ဟု ယူကြ၏။ ထေရ၀ါဒ
ဘယ်ဟာကမှ ဗုဒ္ဓဘုရားဟောအမှန်ဟု ပြောကြမည်နည်း။ ပြောမယ့်သူကလည်း ” ဘုရားမို့လို့လား” – – – – – -။
ဗုဒ္ဓဘုရားပွင့်ခဲ့တာ နှစ်က (၂၅၀၀)တောင် ကျော်ခဲ့ပြီကိုး – – – ။
ဒါဆိုရင် ယနေ့ မြန်မာထေရ၀ါဒလောကမှာ ကိုယ်နဲ့မတူ ကိုယ့်ရန်သူလို သဘောမျိုးတွေနဲ့ အတင်းအဓမ္မနှိပ်ကွပ်နေကြသည်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ဖြစ်ရဲ့လား – – – ။
အတင်းအဓမ္မနှိပ်ကွပ် ခံနေရသူများက အဓမ္မ၀ါဒီတွေလား၊ အတင်းအဓမ္မနှိပ်ကွပ်နေသူတွေက အဓမ္မ၀ါဒီတွေလား ဆိုတာ စဉ်းစားဝေဖန်ကြပါကုန် – – – – ။
ရဟန်းတော်တွေဟောတဲတရားကိုနာဘူးပါတယ် မာသာထရီဆာရဲအကြောင်းကိုတောင်ထည့်ဟောနေတဲဆရာတော် တွေရှိပါတယ် ထေရ၀ါဒကို ဘာလို့ အဘောထားသေး တဲအစွန်းရောက်ဝါဒီ (အတင်းအဓမ္မနှိပ်ကွပ် ခံနေရသူများက အဓမ္မ၀ါဒီတွေလား၊ အတင်းအဓမ္မနှိပ်ကွပ်နေသူတွေက အဓမ္မ၀ါဒီတွေလား ဆိုတာ စဉ်းစားဝေဖန်ကြပါကုန် – – – – ။) အဲလိုရေးရတာလဲ လူတွေအတွေးမတူကျလို ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအမျိုးကွဲနေကျတာပါ ကိုကြိုက်တာကိုကောင်းတယ်လိုပဲပြောကြမှာပါ
စာတတ်ပေတတ်ဘုန်တော်ကြီးများမျက်စိဖွင်ပြီး ခေတ်ပညာကို အမှီလိုက်နိုင်တဲဘုန်းကြီးတွေရှိနေပါပြီ
ထေရ၀ါဒီတိုင်းကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ။ ထေရ၀ါဒထဲကမှ ကိုယ့်ဟာမှ ဘုရားဟောအစစ်၊ ကိုယ့် အယူနဲ့ မတူရင် ဘုရားဟော မဟုတ်ဟုဆိုကာ အတင်းအဓမ္မ (အဓမ္မ)လုပ်နေကြသော အစွန်းရောက်ထေရ၀ါဒီများကို ဆိုလိုတာပါ။
ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ယူပါ။ သူကြိုက်တာ သူယူပါလိမ့်မယ်။
ကျုပ်ကတော့ လောကုတ္တရာထည်းက ပုဂ္ဂိုလ်က
လောကုတ္တရာကို ဝေဖန်တာကို ချဉ်းကပ်ဘို့ ဆွေးနွေးပေးဘို့
တစ်ကယ်တော့ ဒီလိုပို့စ်မျိုးကို ရေးနိုင်ဘို့ ကျိုးစားနေပါတယ်
ဆိုခြင်တာက လူတွေ စာ ( ဓမ္မစာကို လေ့လာမိတဲ့အခါ ) တတ်လာတဲ့အခါ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မကျင့်ကြံဘဲနဲ့ သူများကို စာဖတ်ပြီးဝေဖန်တာတွေ တော်တော်ဆိုးရွားလာတယ်
ဒါပေမယ့် နိဒါန်းအနေနဲ့တော့ မန်းထားလိုက်ပါမယ်
မဇ္ဈိမနိကာယ် ဥပရိပဏ္ဏာသပါဠိတော် မြန်မာပြန် -၃ – သုညတဝဂ် – ၅ – ဒန္တဘူမိသုတ်
၂၁၄။ ဤကာမမှ ထွက်မြောက်ခြင်း နေက္ခမ္မ ဖြင့် သိသင့်သော မြင်သင့်သော ရောက်သင့်သော
မျက်မှောက် ပြုသင့် သော စိတ်တည်ကြည်မှုကို ကာမဂုဏ်တို့၏ အလယ်၌ နေလျက်
ကာမဂုဏ် တို့ကို သုံးဆောင်လျက် ကာမဝိတက်တို့ ထိုးကျင့် ကိုက်ခဲ ခံနေရလျက်
ကိလေသာ ကာမ ဟူသော ပူလောင်ခြင်းဖြင့် ပူလောင်လျက်
ကာမဂုဏ်တို့ကို ရှာမှီးခြင်းငှါ အားထုတ်လျက် သိမူလည်း သိလတ္တံ့ မြင်မူလည်း မြင်လတ္တံ့
မျက်မှောက်ပြုမူလည်း ပြုလတ္တံ့ ဟူသော အကြောင်းကို အဘယ်မှာ ရမည် နည်း၊
တောင်ကြီးထက် ပို၍ ကြီးသော အဝိဇ္ဇာ ဟူသော အစုအပုံဖြင့် တားမြစ်အပ် သော
ပိတ်ပင်အပ်သော မြှေးယှက်အပ်သော ထက်ဝန်းကျင် မြှေးယှက်အပ်သော ( သူ ) သည်
ကာမဂုဏ်မှ ထွက်မြောက်ခြင်းဖြင့် သိသင့်သော မြင်သင့်သော ရောက်သင့်သော
မျက်မှောက် ပြုသင့်သော စိတ်တည်ကြည်မှု ဈာန်သမာပတ်ကို စင်စစ် ကာမဂုဏ်တို့၏ အလယ်၌ နေလျက်
ကာမဂုဏ်တို့ကို သုံးဆောင်လျက် ကာမဝိတက်တို့ ထိုးကျင့် ကိုက်ခဲ ခံနေရလျက်
ကာမဂုဏ်တို့ကို ရှာမှီးခြင်းငှါ အားထုတ်လျက် သိမူလည်း
သိလတ္တံ မြင်မူလည်း မြင်လတ္တံ့ မျက်မှောက် ပြုမူလည်း ပြုလတ္တံ့ ဟူသော အကြောင်းသည် မရှိ။
ရှင်ဦးပဂုတ် ရဟန္တာ ကိုယ်တော်မြတ် ဟာ ဘုရားဟောနဲ့ မညီလို့ 
တစ်ကယ် မရှိခဲ့ပါဘူး တဲ့
ဘာသာရေးကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် သိနားမလည်လို့ 
အဲဒီဘုန်းတော်ကြီး ဟောတာကို နားထောင်ရုံသပ်သပ်ပဲ ကြားခဲ့ပါတယ်
အသောက မင်းကြီး ရဲ့ သံဃာရတနာ တင်ပွဲ ကြီး ပြုလုပ်တော့
မာနတ်ရန်ကနေ စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာ ရှင်ဦးပဂုတ် ရဟန်းရှင်မြတ်လို့ 
ငယ်စဉ်က ဗုဒ္ဓ၀င်စာအုပ် များ မှာ ဖတ်ဖူးခဲ့ပါတယ် ။
ရှင်ဥပဂုတ်ဆိုတာ ရေထဲမှာ သပိတ်ကြီးနဲ့ စောင့်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးမဟုတ်လား။ ဒီဘုန်ကြီးဆိုရင်တော့ မရှိတာသေချာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ဟိုးအရင်က ဆရာတော် တစ်ပါး နာမည်လည်းကြီးပါတယ်။ ရှင်ဥက္ကဌ ဆိုတဲ့ ဆရာတော်ထင်တယ်။ သူဒီဘုန်ကြီးမရှိကြောင်း သက်သေပြဖို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံအထိတောင်သွားပြီး ရာဇာဝင်ရှာပါတယ်။ လုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ ။သူ့ခေတ်သူ့အခါကတောင် အဲဒီဘုန်းကြီးရှိတယ်လို့ သက်သေအခိုင်အလုံပြနိုင်ရင်သူ့ကိုလာတွေ့လို့တောင် ကြေငြာသွားပါသေးတယ်။
ရှင်ဥပဂုတ်က အိန္ဒိယ ဒဏ္ဏာရီ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လို့လည်း ဆိုသူကဆိုပါတယ်။
windtalker ပြောတဲ့ ရှင်ဥပဂုတ်မရှိဘူးဆိုတာ ဟောတာ ဆရာတော်တော်များ တယ်။ နောက်ဆုံးသိသလောက်ဆိုရင် ရွှေပြည်သာဆရာတော်(မေတ္တာရှင် )ရဲ့ သင်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလားဆိုတဲ့စာအုပ်မှာတောင်ပါလိုက်သေးတယ်။
ရှင်ဥပဂုတ်မရှိဘူးဆိုတာ အခုမရှိတာကိုပြောတာလား၊ ဟိုးတုန်းကတည်းက မရှိခဲ့တာ ကိုပြောတာလား ဆိုတာ ကွဲပြားဖို့ လိုပါတယ်။ အခု ရှိ၊ မရှိတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ဟိုးတုန်းကတည်းက မရှိခဲ့ဘူးလို့ ကိုယ်ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ စာအုပ်လောက်နဲ့တော့ အပြတ်ပြောလို့ မတော်ဘူးပေါ့။ ကျမ်းစုံဖို့တော့ လိုပါတယ်။ မြင်သားတောရဆရာတော် ဦးဒီပဓဇရေးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ကျမ်းစာအုပ်မှာ အာသောကဘုရင် ကိုးကွယ်တဲ့ နန်းဦးဆရာတော်နှစ်ပါးက ရှင်မောက္ခလိပုတ္တတိဿနဲ့ ရှင်ဥပဂုတ္တမထေရ်ဆိုပြီး ရှိခဲ့တယ်တဲ့။ ဘုရင်အာသောကနဲ့ ရှင်မောက္ခလိပုတ္တတိဿတို့ တင်တဲ့ သင်္ဂါယနာကို ရှင်ဥပဂုတ္တမထေရ်က သဘောမတူလို့ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကို ထွက်သွားခဲ့တယ်။ (မင်းပြစ်သင့်မှာ ဆိုတာလည်း ပါတယ်။) အဲဒါ သူ့ကြည်ငြိုတဲ့ပြည်သူတွေက သူတို့ ဆရာတော် တောင်သမုဒ္ဒရာမှာ ရှိတယ်လို့ ယုံကြည် နေကြတာပါပဲ။ အဲဒီလို ရှင်ဥပဂုတ် ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကျမ်းစာအုပ်တွေရှိပါသေးတယ်။ ဆရာပါရဂူကလည်း အာသောကခေတ်မှာ ရှင်ဥပဂုတ် ရှိခဲ့ကြောင်း ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျမ်းမစုံပဲနဲ့တော့ ရှင်ဥပဂုတ် လုံးဝ မရှိခဲ့ဘူးလို့ ပြောသင့်၊ မပြောသင့် – – – ။ အခုအချိန်ထိ ရှိ၊ မရှိတော့ မသိဘူးပေါ့။ ကိုယ်မသိတဲ့အရာကို ရိုးရိုးသားသား မသိဘူးလို့ ပြောတာပဲ ကောင်းပါတယ်။
ဘယ်သူမှမနိုင်တဲ့ ဘုရားနှင့်တူအောင်တောင် ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့
ဒီလို ပုထုဇဉ် လင်ယူသားမွေးတဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့
သာဝကထည်းမှာ သက်တော် ၁၆၀ ရှိတဲ့ ကိုယ်တော်တစ်ပါးနဲ့
ချိန်ဆပြခြင်းအားဖြင့် သက်တော် နှစ်ထောင်ကျော်ရင်တော့
ကိုပုကလည်း ကိုယ်ရေးတဲ့ comment ထဲမှာ (ဘယ်သူမှမနိုင်တဲ့ ဘုရားနှင့်တူအောင်တောင် ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မာန်နတ်ကိုတောင် နဘန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့
ရဟန္တာဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ကြီး) ဆိုတာတွေမပါဘူးလေ။ ဒါလည်းကိုယ်မှ မသိတာ။ မသိတာ မသိဘူးလို့ ပြောတာ ရိုးသားပါတယ်ဗျာ။ ရှင်ဥပဂုတ် ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကျမ်းစာအုပ်တွေရှိပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြောချင်တာပါ။ ဒါကြောင့် ရှင်ဥပဂုတ် ရှိခဲ့တယ်၊ မရှိခဲ့ဘူဆိုတာ အပိုင်ပြောဖို့ သင့်၊ မသင့်လေး ရေးလိုက်တာပါ။ ဒီလိုလေး နားလည်ပေးပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသိဖို့က ငါဟာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုဘယ်လောက်နားထောင်နိုင်ပီလဲ၊ဘယ်လောက်လိုက်နာကျင့်ကြံပီးပီလဲ၊သူများအသိတွေကို ကိုယ်သိလုပ်ပီးနေမှာလား၊ဘုရားဟောတရားတွေထဲမှာ ဘာဝါဒ၊ဘာဂိုဏ်း၊ညာဂိုဏ်းမှမပါပါဘူး၊ကိုယ်ကိုတိုင်သိအောင် လာလှည့်လုပ်ကြည့်လှည့်(အကာလိကော)။တကယ်လုပ်ပီးပီလား၊ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေထဲမှာ အစွန်းရောက်စေတဲ့ဝါဒတွေမပါပါဘူး။
ခွင့်လွတ်တတ်ခြင်း၊စာနာတတ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတွေ်ဗြဟ®စိုရ်တရား
အစွန်းရောက်တဲ့ သူတွေ့ ရင်လည်း….ဒီလူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ ယွင်းတာဖြစ်နိုင်သလို
သူ့ ရဲ့ အစွန်းရောက်မှုဟာ..သူဘာသာကိုလည်းဖျက်ဆီးသလို.
ဒီလိုကွဲ့ .. လုံမလေးရွှေအိမ်စည်ရဲ့..။
အဲဒါဆို… မြန်မာပြည်ကြီး.. ဒီလိုဖြစ်မနေဘူး..။
ဒီလိုဖြစ်နေတာ… လက်တွေ့မကျင့်ကြံတဲ့သူ… များလို့..။
ကြာလေ… ပိုပိုဆိုးလာလေဖြစ်တာဟာ..လက်တွေ့မကျင့်ကြံတဲ့သူ တွေ…..ပိုပိုများလာလို့..
ဆိုတော့.. ကားဆိုရင်.. သွားရာလမ်းမှားနေတာမို့.. ယူတန်း..တန်းရတော့မယ့်သဘော….။ (ဂငယ်ကွေ့ပြောတာ…။ ). …လက်ရှိတွေးခေါ်စဉ်းစားနေသမျှ အကုန်ပြောင်းပြန်ပြန်စဉ်းစား.. အဲဒါ အခုထက်တော့ ပိုမှန်လိမ့်မယ်..။
အယူအဆတွေ အတွေးအခေါ်ပိုင်းတွေ နိယာမတွေ အားလုံး အပစ်ပြောစရာမရှိအောင် မှန်ကန်တိကျ
လှ ပါတယ် ၊ သိတဲ့အသိသညာ တွေကို သရုပ်မဖေါ် နိုင်ကြသေးတာတော့ အင်မတန် ဝမ်းနည်းစရာ
အကောင်းဆုံး ပါ ၊ ခု ရေးတဲ့ ပို့စ်လေးကို စိတ်အေးအေးနဲ့သေချာဖတ်ကြည့်တော့လဲ သံဝေဂ တွေများစွာနဲ့
အတွေးပွါး မိပါရဲ့ ၊ ကိုကို မမ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် တို့လဲ ပို့စ် ထဲက ပါတဲ့အတိုင်း တစ်ထပ်တည်း ကျင့်ကြံ
နောက်တိုးအရောတွေပါနေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ သိထား၊ဖတ်ထား တဲ့ ဗုဒ္ဓတရားတွေ၊ ဇာတ်တော်တွေ၊ ဆိုဆုံးမတွေ ဒါတွေအားလုံးဟာ ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းအတိအကျ ပါလို့ ဘယ်သူအာမခံနိုင်လို့ လဲ။ ဇာတ်တော်တွေထဲမှာဆိုရင် အပိုဖြည့်ပြီးလျှောက်ထည့် ထားတာမျိုးတွေပါတယ်လို့ထင်တယ်။ သဘာဝကို ဆန့် ကျင်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေကို ဖတ်မိနေရလို့ ပြောတာ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အဆင့်အဆင့်လက်ဆင့် ကမ်းလာခဲ့ကျရတော့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်တစ်မျိုး လျှောက်ထည့်ရင်တောင် တော်တော်ပျက်စီးနေပြီ။ ဒါတောင်ဗုဒ္ဓသဘောတရားကိုကအေးချမ်းမှုအပေါ်မှာအခြေခံထားလို့ ။ ပြီးတော့ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုပါ အမှန်ဖြစ်အောင်ပြောရင်းပြောရင်းက နောက်လူတွေပါအမှန်လို့ ထင်လာအောင်လုပ်ပြောတဲ့သူတွေလည်းပါမှာဘဲ။ အဲဒါနဲ့ အဲလိုလုပ်ကြံပြောမှုကြီးကနေ ဘုရားဟောသလိုမျိုးကြီးလိုဖြစ်လာပါလေရော။ တခါတလေကျတော့လည်း ရှေးလူလုပ်တာကိုလိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ မှ တကယ်လိုလို၊ ဘာလိုလိုဖြစ်လာတယ်။ တခြားမကြည့်နဲ့ အလှူလုပ်လို့ ရှိရင်ကြည့်လိုက် ။ အလှူအတန်းလုပ်ရင်လှူစရာရှိလှူလိုက်ပေါ့။
အဲဒီမှာမပြီးတာက ဒီလိုမျိုးလှူရသော အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် ဘာဖြစ်လိုပါ၏၊ ညာဖြစ်လိုပါ၏နဲ့ ။
ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် အကျိုးတရားကို (တစ်ခုခုကိုမျှော်ကိုးပြီး) လှူရင် ဒါနမမြောက်ဘူးဆို (ကျွန်တော်အမှတ်မှားတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး)။ အိုကေ အဲလိုသာမျှော်ကိုးပြီးလှူနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေ 10 ယောက်မှာ 8ယောက်လောက်အထိရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူဘာပြောချင်လဲ။
ဒါဆိုဘယ်မှာလဲ ဖြူစင်တဲ့ဒါနကိုအခြေခံတဲ့စိတ်။ ပြီးလို့ ရှိရင် ငါကဗုဒ္ဓဘာသာကို သူများထက် ပိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာ လာသေးတယ်။ အခြေခံသဘောတရားတောင်မသိကြပဲနဲ့ ။ တကယ့်ထေရ၀ါဒီတွေ။ တရားပွဲတွေသွား ပြီးရင် တရားအကြောင်းတွေပြော ၊ ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုပ် ၊ တရားစခန်းတွေကို အိမ်ပြောင်းသလို ပြောင်းပြီး ငါ့သားက ဘယ်နိုင်ငံမှာဒေါ်လာဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုပြီး အပြိုင်အဆိုင်တွေပြောကြ၊ ငြင်းကြနဲ့ ။
သူတို့ တတွေကိုရော ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ ပါးစပ်ကဘုရားဘုရားနဲ့လုပ်တော့တလွဲ။
ပြီးတော့အစွန်းရောက်တာတွေလဲရှိသေးတယ် ကိုယ့်ဘာသာမှ အမှန် သူများဘာသာတလွဲဆိုတာတွေလေ။ တွေ့ ဖူးကြမှာပါ။ ကိုယ်ကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတော့ အဲလိုမျိုးတော့မပြောနဲ့ လေကွာ လို့ ပြောရုံကလွဲမျိုး ဘာမှမတတ်နိုင်ပြန်ဘူး။ အဓိကကတော့ ဘယ်ဘာသာကပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာတွေမှန်သမျှရွေးယူလိုက်လေ။ အဲဒါဆိုအိုကေပဲ။
ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းရဲ့ ခံယူချက်ကတော့ ကောင်းတာလုပ်တာထက်ကို မကောင်းတာမလုပ်မိစေအောင်ထိမ်းသိမ်းတာက ပိုခက်တယ်လို့ ထင်တယ်။ အဲဒီတော့ မကောင်းတာမလုပ်မိအောင် ပိုကြိုးစားမယ်၊ အခွင့်သင့်တုန်းကောင်းတာကိုလုပ်သွားမယ်၊
သြော်.. ကျနော်မှတ်သားသလောက် ပြောရမယ်ဆိုရင်…
အလှူလုပ်တာပြီး ဘာဖြစ်ပါ၏ ညာဖြစ်ရပါ၏ ဆုတောင်းတာက .. သမုသယသစ္စာပွားများနေပါ..
တကယ်တော့ ..လူပဲဖြစ်ဖြစ် ..နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရထားတာက ခန္ဓာငါးပါးပါ .. ခန္ဓာမှန်ရင် ဖောက်ပြန်တတ်တာမို့လို့..ဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုပါတယ်..
အဲသစ္စာ(အမှန်တရား) တွေကိုမသိဘဲနဲ့..ဘုရားရှေ့မှာ လိုက်ဆုတောင်းနေတာဟာ..
သမုသယသစ္စာပွားများနေတာပါ.. ဒုက္ခ (အိုနာသေ) ရဖို့ အရေး .သိန်းချီးဝယ်သလို ဖြစ်နေကြပါတယ်..
ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ခန္ဓာတိုင်းကို ဒုက္ခသစ္စာလို့ ဆိုလို့ ရပါ့မလား။ ဒါလေးကွဲပြားဖို့ လိုပါတယ်။ အသားဖြူတိုင်း တရုတ်လူမျိုး မဟုတ်သလို အသားမဲတိုင်းလည်း ကုလားလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီလိုပါပဲ ခန္ဓာတိုင်းလည်း ဒုက္ခသစ္စာမထိုက်ပါဘူး။ သင်္ခါရလို့ ဆိုတဲ့ ကံ (အစွဲပါသော အလုပ်)တွေကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ ဖောက်ပြန် သဘော၊ ခံစား သဘော စတဲ့ အစွဲခန္ဓာတွေကသာ ဒုက္ခသစ္စာပါ။ ကျန်တဲ့ ဖောက်ပြန်သဘော၊ ခံစားသဘောတွေက တခါတရံ ဒုက္ခဝေဒနာ၊ သုခ၀ဒနာ ဒါမှမဟုတ် ဥပေက္ခာဝေဒနာပဲ ဖြစ်တာပါ။ ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ ဒုက္ခသစ္စာ မတူပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့ ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာ ဖောက်ပြန်၊ ခံစား၊ သိ၊ မှတ်၊ စေ့ဆော်မူတွေဆိုတဲ့ သာမန်ရိုးရိုးခန္ဓာတွေကို ယူလို့ သင့်ပါ့မလား။ အစွဲ သမုဒယသစ္စာကြောင့် ဖြစ်နေရတဲ့ ဖောက်ပြန်၊ ခံစား၊ သိ၊ မှတ်၊ စေ့ဆော်မူ စတဲ့ အဖြစ်တွေကသာ ဒုက္ခသစ္စာပါ။ ခံစားမှုက ဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ပါ။ အဖြစ် (အစွဲခန္ဓာ) ဆိုတဲ့ ဘ၀ကိုသာ ဒုက္ခသစ္စာလို့ ပြောတာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ..ကျနော်လည်းဘုရားဟောတာကို .ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြုံဖူးခြင်းမရှိပါဘူး..
အခု ဆရာတော်တွေ အထူးသဖြင့်.. မိုးကုတ်ဆရာတော်တွေ ဟောတာပဲ နာဖူးတာ များပါတယ်.. ကျနော်နာဖူးသလောက်ကတော့ .. ဖောက်ပြန်တာဟာ.. ဒုက္ခသစ္စာပါတဲ့..
ဒုက္ခ .. ဆင်းရဲကြောင်းး
သစ္စာ .. အမှန်တရားပါ တဲ့..
Shanma TUmdy ဘုရားဟောထားတာကို ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ထောင့်ကနေ ဖွင့်ဆိုဟောနေကြတဲ့ ပညာရှင်တွေ အများကြီးပဲရှိပါတယ်။ ဆရာစွဲမထားပဲ အတတ်နိုင်ဆုံး အသိဥာဏ်ဖွင့်ပြီး စုံအောင်လေ့လာသင့်ပါတယ်။ ပြီးမှ ဘယ်ဟာဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ဝေဖန်ပါ။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားမှာတင် လမ်းဆုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ အသိဥာဏ်သေသွားတာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဥာဏ်ဆိုတာ ရှင်သန်နေမှ ကောင်းတာပါ။
Shanma TUmdy ရေ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက သူများပါးစပ်မှာ လမ်းမဆုံးစေနဲ့လို့ ဟောထားတယ်နော်။ အဲဒါ Shanma TUmdyလဲ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ပါးစပ်မှာ လမ်းမဆုံးပါနဲ့။ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ အမှား အမှန် ဝေဖန်ပေးပါ။ ထစ်ခနဲရှိ ဘယ်ဆရာတော်က ဘယ်လိုဟောထားတာနဲ့ပဲ ဆရာတော် (သူများ)တွေ ပါးစပ်မှာပဲ လမ်းဆုံးနေကြတယ်။
ဓမ္မနဲ့ဘာသာ၊ သာသနာနဲ့ဓမ္မတာကို ကွဲပြားတာကို လူအများ သတိမမူကြလို့ဖြစ်တာပါ။ real ပြောသလိုပဲ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် မရှိတော့မှ ဘယ်ဟာကိုဘာလို့ပြောရန် ခက်သွားပြီ။ (တကယ်ပြောရရင် ဘုရားရှင်ရှိလည်း ဒီလိုပဲ ဘယ်သူ့ကိုဘုရားလို့ ဘာကြောင့်သတ်မှတ်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းဆင်ခြေများ ရှိအုံးမှာပါ)။ ဒီတော့ ဆရာကောင်းကိုရှာ၊ ကိုယ်ပိုင်ညဏ်၊ အကျင့်စရဏကိုသုံး မှန်တယ်ထင်ရင် ဆက်သာလုပ်ပေတော့။ အတိတ်ပါရမီနဲ့ အများကြီးဆိုင်မယ်လို့လည်းထင်တယ်။ လမ်းရိုးတယ်၊ ရှည်တယ်၊ မမှန်ဘူးထင်ရင် ကိုယ်နဲ့ကိုက်မယ့်ဆရာ၊ နည်းလမ်းကို ရှာဖွေဆည်းကပ်ပါ။ ဓမ္မတာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ် အယူဓလေ့တွေမှန်းသိပေမဲ့ (သို့မဟုတ်) ဓမ္မနဲ့မကိုက်ပေမဲ့ လိုအပ်ချက်အရ မျက်ကွယ်ပြုပေးရင်း ဘုရားရှင်ထားခဲ့တဲ့ သာသနာကနေ လွဲချော်သွားကြတယ်။ ကိုယ်ကမကြိုက်လို့ အသစ်ချပြလည်း ကြာလာရင် လူသုံးများရင် ပျက်မှာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ မူကွဲတွေ များလာတယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့လည်း ဓမ္မဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် မဟုတ်ဘူးလေ…။
One of the most curious things for me is “Does Buddha really talk about matter (physics) things?” I once readabook of “U San Lwin.” If he did really talked about suchasupreme knowledge of nature and philosophical-truth (logically truth), how come today scientist don’t use his dharma asareference in their thinking?
of course, Abhidhamma scientifically proves the existence of matter and its interaction. Lord Buddha neither explained the creation nor created anything that does not exist. But His logic has gone far enough to match today’s scientific discoveries.
ဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်တွေက မစ္စိမပဒိပဒါ အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်လို့ ပါတဲ့အတိုင်း သစ္စာလေးပါး တရားတော်ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့သူတွေသာ ထေရ၀ါဒ ဖြစ်ပါတယ် .. ဘုရားဟောတွေထဲမှာလဲ ပါပါတယ်
အစွန်းရောက်ထေရ၀ါဒီများဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဟောကြားညွှန်ပြမှုတွေကို ကျော်လွှားပြီး မိရိုးဖလာဆန်လွန်းတဲ့အယူအဆလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် အစွန်းရောက်ကြရခြင်းပါဘဲ။
ဘုန်ြးကီးကျောင်းသွားတိုင်း၊ ရဟန်းတော်တွေရှေ့မှာ မျက်စေ့နောက်လောက်အောင်လမ်းသလားတိုင်း၊ ဗုဒ္ဓရဲ့အယူကိုလိုက်နာပြီလို့တထစ်ချသတ်မှတ်ရင်တော့၊ တက်တက်စင်အောင်လွဲပြီပေါ့။
ဗုဒ္ဓဘုရားက ထေရ၀ါဒ၊ မဟာယာန၊ ဘာဝါဒ၊ ညာဝါဒဆိုပြီး ဟောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေငြိမ်းစေတဲ့ အရိယသစ္စာတရားကိုသာ ဟောကြားခဲ့တာပါ။ ဘုရားမရှိတော့မှ နောက်လူတွေက ကိုယ့်အယူမှ ဘုရားဟောဆိုပြီး ဒိဋ္ဌုပါဒါန်တွေနဲ့ ၀ါဒတွေခွဲခြားကြလို့ ကွဲပြားကုန်ကြတာပါ။ အလွန်ကိုပဲ စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး စာပေဆိုတာ ဘာလဲလို့ သိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါမယ်။ ဒါမသိရင် ပြောဆိုသမျှစကားတွေဟာ အချီး
အနှီးဖြစ်ရဖို့ရှိပါတယ်။ စာပေက ဘာကိုဖြစ်စေချင်ပြီး ဘာက်ိုပြောတာလို့ အားလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်
ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ဥပမာ ထန်းလျှက်(ထညက်)ဆိုပါစို့။ အသက်တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်လောက်က ကြုံခဲ့ဘူးတာပါ။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသ တနေရာကဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ထန်းလျှက်ဆိုတာကို သရက်သီး လို အညှာချွေရတဲ့အသီးလို့မှတ်နေပါသတဲ့။ စကားတွေကိုလည်းကြားရတယ်၊ စာတွေကိုလည်းဖတ်ရပေမယ့်
အဓိပ္ပာယ်ကိုကျတော့ မသိဘူးဖြစ်နေတာ ပေါ်လွင်နေတယ်မဟုတ်လား။ စာသင်ရတာကတခြား၊ သိအောင်
ကျင့်ရမှာက တစ်ခြားဆိုလျှင်တော့ စာသင်ရတာရဲ့ အကျိုးက ပြစရာမရှိဘူးဖြစ်မနေဘူးလား။
ုkoyo ပြောသလိုပါပဲ၊ သင်နေရတဲ့ စာတွေဟာ လူ့အတွက် တကယ် အသုံးမကျတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့ သင်ပေးနေကြမယ်ဆိုရင် လူတွေရဲ့ တကယ်အားကိုးခြင်းကို ရနိုင်ပါ့မလား။ ဗုဒ္ဓရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေဟာ လူတွေအတွက် မည်သူမဆို တကယ်အသုံးကျစေတာပါ။ အခု စာတွေသင်တယ် လူတွေ အမှန် အသုံးကျအောင် လမ်းညွှန်မှု မပြုနိုင်ကြဘူးဆိုရင် စဉ်းစားဖို့တော့ ကောင်းနေပါပြီ။ သင်တဲ့သူနဲ့ အသင်ခံရတဲ့ သူတွေရဲ့ အရည် အချင်းတွေကပဲ ညံ့နေတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဗုဒ္ဓတရားကို တဆင့် ပြန်သင်ကြားပေးတဲ့အပေါ်မှာ ဖွင့်ဆိုချက် (အဋ္ဌကထာ)ကျမ်းတွေပဲ လူတွေအတွက် အသုံးမကျတဲ့ ဆီရောက်အောင် ဖွင့်ဆိုထားတာလားဆိုတာ စိစစ်ဖို့တော့ ကောင်းနေပါပြီ။
Myat Chit Shin says:
ရှင်မိုးပြာရဲ့ ဗုဒ္ဓတရား အနက်ဖွင့် ဆိုချက်တွေထဲ မှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ မငြင်းနိုင်တဲ့ အမှန်တရားတွေ ပါနေပါတယ်။ အနာဂတ် လူ့ ဘောင် ငြိမ်းချမ်းသာယာ ရေး အတွက် အရေးကြီးတဲ့ စဉ်းစားစရာတွေ လဲ ပါနေပါတယ်။ ရှင်မိုးပြာရဲ့ ဗုဒ္ဓတရား အနက်ဖွင့် ဆိုချက်တွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် လက်ရှိ ထေရ၀ါဒ အယူအဆတွေ က စိတ္တဇဆန်လွန်း နေသလိုတောင်ဖြစ်တယ်။ ရှင်မိုးပြာက ဗုဒ္ဓတရား ကို အနက်ဖွင့် တဲ့ အခါ လူသားတိုင်းအတွက် လက်လှမ်းမီတဲ့ လူသားဝါဒ ရှုထောင့် ကနေ ဖွင့် ဆိုထားတာကို လေ့ လာတွေ့ ရှိရပါတယ်။ လောက ငြိမ်းချမ်းသာယာ ရေး အတွက် ဦးတည်တဲ့ အနက်ဖွင့် ဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်မိုးပြာရဲ့ ဗုဒ္ဓတရား အနက်ဖွင့် ဆိုချက်တွေကို Buddhism Without Beliefs and Metaphysics လို့ ခေါ်ချင်ပါတယ်။
ဟုတ်တာပေါ့ ဒီလောက်လေးစားစ၇ာ အမှန်တ၇ားတွေ –အယူအဆတွေကို လူမှန်၇င် ဘယ်ယူပါ့မလဲ????? မဟာသူတော်ကောင်းကြီး ဘိုးတော် မိုးပြာသာ ယူနိုင်မှာလေ—-
(အော် မိုးပြာဘိုးတော်ဆိုတာ ၁၉၈၀လောက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၇ဟန္တာဆိုပြီး ထကြောင်လို့တ၇ားဆွဲခံ ခဲ့၇တဲ့ ဘဲ–ဘယ်ဘု၇ားက sponsor ပေးထးမှန်းမသိတဲ့ မိုးပြာဝတ်၇ုံကြီးတကားကားနဲ့ထေ၇၀ါဒကို ဖျက်ဆီးဖို့တမင်လျှောက်လုပ်နေတဲ့ ဘဲ–)
သူ့ ၇ဲ့ အ၇ိယာသစ္စာဝါဒတွေကို နာယူလိုက်ကြပါဦး (အခု တင်ပေးမဲံ့ သူတို့ ၇ဲ့ မြင့်မြတ်တဲံ့ မဟာလူသား ၀ါဒတွေ ဆိုတာ သူတို့ အယူ ဟုတ်မဟုတ်ကို မိုးပြာဂိုဏ်းသားတွေ ဖြန့်ချိနေတဲ့ စာအုပ်မှာ ဖတ်ကြည့်ကြနော်—–)
ကျတော့အထင်တော့ အောက်ဆုံးအချက်ကို တော်တော်ခိုက်သွားလို့ကြိုက်ကြတယ်နဲ့ တူတယ်။။။။။။။။။။။
Buddhist Teachings are never meant to be grasped dogmatically.
The basic teachings of Buddha are quite universal, and humanistic so it is easily adaptable to any culture.
Most of the Buddhist schools in the past are in some way not very compatible with the social and cultural values of our postmodern age since all of them appeared in Feudal ages.
In this sense, we needaNew Form of Buddhism,aGlobal Buddhism or an Open Source Buddhism, that can address the contemporary issues from the point of view of Ancient Buddhist Truths.
Any form of Hegemony in Buddhist world is really against the teaching ofaBuddha.
Global Buddhism or an Open Source Buddhism
.. မြန်မာပြည်က မြန်မာတွေဟာ.. ဗုဒ္ဓဘာသာကို .. မြန်မာတွေနဲ့ချည်းဆိုင်တယ်.. ထင်နေကြတယ်လေ..။
မြန်မာတွေသာ ဗုဒ္ဓတ၇ားတွေကို သိတတ်နားလည်.. ကိုယ်စားပြုသလို ပြောဆို ရေးသားနေတာတွေ့ရတယ်..။
မြန်မာ့လူဦးရေက.. သန်း၅၀-၆၀ပဲရှိပြီး.. ကမ္ဘာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူတွေ.. သန်းရာချီရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာ သတိမထားမိကြဘူး..။
ဒီပို့စ်ကိုရေးတဲ့သူက ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မဝါဒီတစ်ဦးဖြစ်နိုင်တယ်။ရှင်မိုးပြာထောင်ထဲမှာရောက်နေတာကို မခံနိုင်လို့ရေးတာလို့ ပဲ ကောက်ချက်ချမိတယ်။
ဒီပို့စ်ရေးတဲ့သူ ဘာဝါဒီတုန်းဆိုတာတော့ မသိပါဘူး ဒါပေမယ့်
ကျွန်တော်က ပစ္စုပ္ပန် ကမ္မ၀ါဒီတွေအကြောင်း လေ့လာထားတော့ ညီမလေးကိုမေးရဦးမယ်
အလွန်အင်မတန်မှ ရက်စက်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ လူဆိုးကြီးတွေတောင် ကြင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိကြသေးတာ
ကိုယ့်ဘ၀အတွက် ဘာအခွင့်အရေးမှ မယူတဲ့အပြင် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေကို လျစ်လျူရှုပြီး လိုက်နာစေဖို့လူအများစုကို ဟောပြောနေလိုက်တာ။
လိုက်နာသူ လူသားအများစုအတွက် ငြိမ်းချမ်စေမဲ့အပြင် သူနဲ့ထိစပ်နေသူတွေ နောက်အဲဒီ ထိစပ်နေသူတွေနဲ့ ထပ်မံထိစပ်နေသူတွေ ငြိမ်းချမ်းပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ communication ကြီး ဖြစ်ဖို့လို့ ပြောဆိုဟောပြောနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကတော့ နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် လေ့လာသင့်တယ်လို့ အကြံပြုပါရစေ
Nan Shin ကလည်းထင်ကြေးနဲ့ မပြောရဘူးလေ။ realman ဆိုတာ မှန်တဲ့ဖတ်က ရပ်တည်မယ့်သူပါ။ ဟိုဝါဒီ၊ ဒီဝါဒီတွေနဲ့ ဘောင်မခတ်လိုက်ပါနဲ့။ အားလုံးကို လွတ်လပ် ငြိမ်းအေးစေချင်တာ ကိုယ့်ဆန္ဒပါ။
အဲဒိံလိုကြေးဆို၇င် ကိုကြီး၇ဲ့အမေကို သူများတွေမုဒိန်းလာကျင့်သွားလည်းငြိမ်သာခံနေလိုက် (သူလည်း သူ့ အမြင်နဲ့သူကောင်းတယ်ထင်လို့ ကျင့်တာလေ ဟုတ်ဘူးလား) –လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲတာ သဘာဝပါ၊ သဘောထားကြီးဖို့ ပဲလိုတာ–ကိုယ်နဲ့မတူ ကိုယ့်ရန်သူလို သဘောမျိုးတွေနဲ့ အတင်းအဓမ္မနှိပ်ကွပ်နေကြသည်မှာ အလွန်အရုပ်ဆိုပြီး အလွန်သဘောထားသေးသော လက္ခဏာများ ဖြစ်နေပါဦးမယ်—- သွားပြီး တ၇ားစွဲတာတို့ဘာတို့ ပြန်လုပ်နေ၇င် ကိုကြီးပဲ အလကားနေ၇င်း အသိဥာဏ်ဗဟုသုတ မ၇ှိတဲ့သူ အစွန်းေ၇ာက် သူဖြစ်သွားဦးမယ် –(၇ှိတ်၇ှိုးနဲ့နော် တော်ကြာ အစ်ကိုလည်း အစ်ကိုပြောတဲ့အစားထဲပါသွားဦးမယ်)
ကိုယ်လိုချင်တာ၇ဖို့ကိုယ်လို၇ာအတွေးအခေါ်တွေကို လို၇ာဆွဲတွေးပြီး အာကျယ်နေတဲ့ မဟာသူတော်ကောင်းစိတ်ဓါတ်များပိုင်ရှင် တွေလည်း ဖြေပေးနိုင်ပါတယ်—-
ဘယ်တရားတွေ၊ ဘယ်အဆုံးအမတွေ နာယူကျင့်သုံးနေရလို့ အဲဒီလောက်တောင် စကားတွေ ယဉ်ကျေးနေ (ပြောင်းပြန်ယူပါ) ရတာလဲဟင်။
အင်းလေး အရိယသစ္စာမဟုတ်တဲ့ အဆုံးအမတွေ နာယူမိနေတဲ့သူတွေကတော့ ထစ်ကနဲရှိ ဒီလိုစကားရိုင်းတွေပဲ ထွက်တော့တာ။ ဒါ့ကြောင့် အရိယသစ္စာသိအောင် လုပ်နေရတာ မောလို့။
ယဉ်ကျေးသွားအောင် ဗုဒ္ဓ၏ အရိယသစ္စာကို http://www.ariyathitsa.org/html/home_3.html မှာလေ့လာကြည့်ဗျာ။